Ajụjụ: Ịgba ọsọ ga-enyere m aka ịgba ígwè - BikeHike
Ajụjụ: Ịgba ọsọ ga-enyere m aka ịgba ígwè
Ọsọ ọ na-emebi arụmọrụ ịgba ígwè?
Ndị na-agba ígwè kwesịrị ịgba ọsọ?
Ego ole ka onye na-agba ígwè kwesịrị ime?
Ekwesịrị m ịgba ọsọ tupu ma ọ bụ mgbe m gachara?
Enwere m ike ịgba ọsọ na okirikiri n'otu ụbọchị ahụ?
Gịnị kpatara na ndị na-agba ígwè enweghị ike ịgba ọsọ?
Kedu ihe kpatara o ji esi ike ịgba ọsọ mgbe ịnya igwe?
Ọ dị njọ ịgba ọsọ mgbe ịnya igwe?
Ịgba ígwè ma ọ bụ ịgba ọsọ ọ ka mma maka ume?
Kedu otu ịnya igwe ga-esi gbanwee ahụ m?
Ọ dị mma ịgba ígwè ma emesịa mgbatị ahụ?
Ogologo oge ole ka m ga-eji igwe kwụ otu ebe maka mgbatị ahụ dị mma?
Ndị na-agba ígwè hà ka ndị na-agba ọsọ?
Oge ịgba nkeji iri abụọ kwa ụbọchị ezuru?
Ị nwere ike hapụ abụba afọ site n'ịgba ịnyịnya?
Ọ na-agba ọsọ karịa ịnya igwe?
Ịgba ígwè ma ọ bụ na-agba ọsọ ọ ka mma maka VO2 max?
Ọ dị maịl 5 dị mma n'ịnya igwe?
Ịnya igwe ọ na-eme ka ị na-agba ọsọ nwayọ nwayọ?
Ịgba ọsọ na ịgba ígwè na-eji otu uru ahụ eme ihe?
Gịnị kpatara ịgba ígwè ji adị mfe karịa ịgba ọsọ?
Ịnya igwe ọ na-eme ka ụkwụ gị buru ibu?
Ịnya igwe na-eme ka ụkwụ gị buru ibu?
Ọ dị mma ijikọta ịgba ọsọ na ịgba ígwè?
Ịnya igwe nwere ike inye gị abs?
Ọ ka mma ịnya igwe ma ọ bụ buru ụzọ gbaa ọsọ?
Maịl ole nke ịnya igwe kwụ otu ebe na ịgba ọsọ?
Kedu ka m ga-esi zụọ maka ịgba ígwè na ịgba ọsọ?
Ịnya igwe ọ na-esi ike karịa ịgba ọsọ?
Mbara akwara obi, ike muscular na ndidi mmega ahụ. Na mgbakwunye na njupụta ọkpụkpụ ka ukwuu, ịgba ọsọ dị ka mgbatị ọzụzụ na-agafe agafe nwekwara ike inye ahụmahụ dị iche iche aerobic maka onye na-agba ígwè, na-eduga n'ịbawanye ike na ntachi obi.
Mgbe ị na-agba ọsọ, mmebi eriri akwara nke na-eme dị ukwuu karịa mmebi na-eme mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè. Ya mere, oge ịgba ọsọ ikuku nke awa abụọ ga-abụ ihe na-enye gị nsogbu n'ahụ gị karịa ọzụzụ ọzụzụ ikuku nke awa abụọ na igwe igwe.
Mgbe obere oge ezumike ngwụcha oge gasịrị, n'ụzọ ọ bụla gụnyere ịgba ọsọ na usoro mgbatị ahụ oyi gị. N'oge usoro ọzụzụ 'nchịkọta izugbe' ọ baghị uru ka ị na-adị mma ogologo oge ị na-eme, na n'ụzọ dị otú a ịgba ọsọ nwere ike inyere gị aka ịgba ígwè.
Ịkwesịrị ịrụ ọrụ ruo ike ịgba ọsọ nkeji 30 nke ọma, na-enweghị oke mgbu n'echi ya. Ụfọdụ ihe na-emetụta nnabata ahụ na ịgba ọsọ gụnyere: Oge (Ngụkọta oge ọzụzụ) Usoro (Ụdị ọzụzụ eji).
Azịza dị mkpirikpi nke onye ọ bụla na-achọ nwere ike ịgbakọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ahụ ike, buru ụzọ gbaa ọsọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ iwulite ntachi obi gị na ike ikuku, gbaa ọsọ ikpeazụ. N'ụzọ bụ isi, mmeghachi omume ngbanwe nke ahụ gị ka ukwuu maka ụdị mmega ahụ nke ịmechara mgbatị ahụ gị na-eme.
Naanị mara na ọ ga-abụ uru cardio ka ukwuu karịa muscular. Ime ha abụọ n'otu ụbọchị kwesịrị ịdị mma ma ọ bụrụhaala na ị na-enye onwe gị mgbake zuru oke.
Ịgba ígwè na-ewuli akwara ndị ị na-adịghị eji nke ukwuu na-agba ọsọ, si otú a na-egbochi ọnyà na mmerụ ahụ, na ịgba ọsọ na-ewuli uru ahụ a na-ejikarị eme ihe n'ịgba ígwè, ya bụ hamstrings. Ha abụọ na-enye aka na cardio gị, mana echere m na ị na-agba ọsọ, ị nwere ike ịlanarị mgbatị ahụ dị mkpụmkpụ (kadio-maara ihe) karịa ị nwere ike iji ịgba ígwè.
Isi ihe bụ ka ị na-esi n'ịgba ígwè na-agba ọsọ na-agba ọsọ akwara ndị na-abata igwu egwu chọrọ oge iji mee mgbanwe na mmegharị ọhụrụ na nrụgide etinyere ha. Nke a bụ ya mere ị na-enwekarị ọnya n'ime izu abụọ mbụ nke ịgba ọsọ, na ụdị ịgba ọsọ gị na-enwe mmetụta na-adịghị mma.
Na ọzụzụ, ị nwere nhọrọ. Onye ọ bụla na-ekweta na triathletes kwesịrị ịgba ọsọ mgbe ụfọdụ ịnya igwe kwụ otu ebe site n'ịkwado ime otu ihe ahụ n'ọsọ, mana e nwekwara nkwenye na ọ dịghị mkpa ịgba ọsọ mgbe ọ bụla.
Ịgba ígwè bụ egwuregwu na-enwe mmetụta dị ala nke na-enyere aka wulite ntachi obi na ume. E jiri ya tụnyere ịgba ọsọ, ọ dị mfe ịmalite ma nọgide na-enwe ume mgbe ị na-agba ịnyịnya n'ihi na ọnya ahụ na mmebi na-egbu oge n'ihi mmetụta dị ala.
Ijikwa ibu ibu Ịgba ígwè, ọkachasị n'oke ike, na-enyere aka belata ogo abụba anụ ahụ, nke na-akwalite njikwa ibu ahụ dị mma. Na mgbakwunye, ị ga-eme ka metabolism gị dịkwuo elu ma wuo ahụ ike, nke na-enye gị ohere ịmịkwu calorie, ọbụlagodi mgbe ị na-ezu ike.
Na-agba ọsọ mbụ mgbe ị na-agba ọsọ na-abịa. "Mgbe mgbatị ahụ bụ ihe kacha gị mkpa, mgbatị ahụ gị ndị ọzọ kwesịrị ịkwado uru ịnya igwe," Hammond na-ekwu. Nke ahụ pụtara - ị chepụtara ya - ị ga-ebu ụzọ gbaa ụgbọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme cardio na ike gị n'otu ụbọchị ahụ.
Mee atụmatụ ịnya igwe kwụ otu ebe ma jiri nkeji 30-60, ụbọchị 3-5 n'izu. Jiri ọkụ na-ekpo ọkụ malite njem ọ bụla. Pedal na nwayọ, dị mfe maka nkeji 5-10. Mgbe ahụ bulie ọsọ gị ka ị malite ịsacha.
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ ma gbaa ịnyịnya ígwè maka otu oge, ịgba ọsọ ga-abụ ihe na-ere calorie ka ukwuu. Ị na-anọdụ ala ka ị na-agba ịnyịnya, ka emechara. Onye na-agba ịnyịnya na-ere ọkụ dị ka calorie 3,500-4,500 kwa ogbo nke njem ahụ (na-abụkarị ihe dị ka awa ise ma ọ bụ isii), ebe onye marathoner ga-ere ọkụ gburugburu 3,000 n'otu agbụrụ.
Ime mgbatị ahụ n'ịnyịnya opekata mpe nkeji iri atọ kwa ụbọchị ga-ewulite ntachi obi obi na akwara gị. Ị nwekwara ike na-enwe mmetụta dị elu ike kwa ụbọchị, n'ihi na mmega ahụ na-enyere aka ịkwalite ume gị dum.
Ee, ịgba ígwè nwere ike inye aka idalata abụba afọ, mana ọ ga-ewe oge. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosiri na ịnya igwe mgbe niile nwere ike ime ka mfu abụba zuru oke ma kwalite ibu dị mma. Iji belata ọnụ ọgụgụ afọ n'ozuzu ya, mmega ahụ nke ikuku ikuku na-adịghị agafe agafe, dị ka ịgba ígwè (ma n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí), na-adị irè iji belata abụba afọ.
Ịgba ọsọ na ịgba ígwè bụ ihe omume ntụrụndụ na mmega ahụ nke ndị mmadụ na-atọ ụtọ gburugburu ụwa. N'ozuzu, ịgba ọsọ na-ere calorie karịa ịgba ígwè. Ma ọ dịkwa elu mmetụta na ike na mọzụlụ na nkwonkwo.
Ka mgbatị ahụike obi gị (VO2 max) na-akawanye mma, a chọrọ obere pasent nke ikike ịrụ ọrụ n'ime gị iji mepụta otu ọnụ ọgụgụ watts. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ígwè na onye na-agba ọsọ, ị ga-achọpụta na ị nwere otu VO2 max maka ịgba ígwè na ihe yiri ya ma dịtụ iche VO2 max uru maka ịgba ọsọ.
Nkezi oge iji igwe kwụ otu ebe maịl bụ nkeji atọ ruo anọ. 17 ruo 18mph bụ nkezi ọsọ ịgba ígwè nke onye ahụ siri ike na-eji igwe kwụ otu ebe mara mma na-agba na mbara ala na ọbụna ala.
Ịnya igwe anaghị enyere gị aka ịgba ọsọ ọsọ. Iji bụrụ onye na-agba ọsọ ọsọ, ị ga-azụrịrị site n'ịgba ọsọ. Ịgbakwunye ịgba ígwè na usoro ọzụzụ gị agaghị enyere gị aka imeta oge ịgba ọsọ ọsọ ọsọ, n'agbanyeghị na enwere ike iji ya dị ka ngwá ọrụ ịzụ ahịa dị irè ma ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe nke ọma.
Ma ịgba ọsọ na ịgba ígwè na-eji quadriceps na hamstrings, akwara elu na azụ azụ na-arụkọ ọrụ. Quads gị na-ebuli ụkwụ maka ijegharị mgbe ị na-agba ọsọ ma ọ bụ na-atụgharị pedal mgbe ị na-agba ịnyịnya, ebe eriri ụkwụ gị na-adọghachi ụkwụ azụ azụ. Mgbe ị na-agba ọsọ, akwara apata ụkwụ gị bụ akwara bụ isi.
N'ụzọ bụ isi, ebe ụkwụ gị siri ike karịa ka ha kwesịrị ịdị na-eje ije ma ọ bụ na-agba ọsọ, ọ ka na-eji uru akwara karịa ịgba ígwè. Ịnyịnya igwe nwere ike, n'ezie, 'ụsọ osimiri' (ya bụ mgbe ị na-agba n'elu ugwu), nke ga-enyere gị aka ịgba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ na-enweghị mkpa ịnọgide na-enwe nnukwu mbọ anụ ahụ.
Ịgba ígwè agaghị enye gị nnukwu agba, ma ọ nwere ike inye gị ọdịdị mara mma n'ihi uru cardio na uru na-ewuli elu. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya mgbe nile na ọsọ ọsọ na nkwụsị siri ike, ị ga-ahụ ike siri ike - yana uru ahụike na-aga na ya, gụnyere obere hip, ikpere na nkwonkwo ụkwụ.
Azịza dị mkpirikpi maka ma ịgba ígwè ma ọ bụ na ị gaghị eme ka ụkwụ gị buru ibu bụ - mba. N'ezie, ịgba ígwè na-eme ka ahụ ike ụkwụ gị dịkwuo mma, ma dị ka mgbatị ahụ nke ikuku, ọ na-arụ ọrụ ahụ ike nke ntachi obi gị, na-eme ka ha na-eguzogide ike ọgwụgwụ mgbe ị na-azụ, ma ọ bụghị ime ka ha buru ibu.
Ịmelite arụmọrụ Ịgba ígwè na-enyere aka melite arụmọrụ ịgba ọsọ site na ịzụlite ahụ ike, ume na ntachi obi na-emebighị akwara ụkwụ gị. Ọ na-enwe mmetụta dị ala nke mgbatị obi na site n'ịgbakwunye ya na usoro ọzụzụ gị kwa izu ọ ga-enyere gị aka imekwu ihe na obere nchekasị na ahụ gị.
Ịgba ígwè anaghị ewuli abs gị ozugbo, ma ọ nwere ike inye aka kpughee abs gị ma ọ bụrụ na ọ jikọtara ya na nri kwesịrị ekwesị na ụfọdụ mgbatị ahụ. Ịnya igwe kwụ otu ebe na-enyere aka belata abụba na-ekpuchi afọ gị.
Ịgba ọsọ na-ere calorie karịa ịnya igwe ma bụrụkwa ntụkwasị obi maka ahụ ike toning, yabụ na usoro, ọ nwere ike melite ahụike gị karịa. Iji nweta ọtụtụ n'ime ihe omume abụọ a, buru ụzọ jiri igwe kwụ otu ebe wee gbaa ọsọ, na-amachi onwe gị na ọ bụghị ihe karịrị pasentị 10 nke njem ị gbara ka ị na-amalite na mbụ.
Iwu izugbe nke isi mkpịsị aka bụ 1:3 ma ọ bụ 1:2 na-agba ọsọ na oke igwe kwụ otu ebe na kilomita. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, 1 mile nke ịgba ọsọ n'ogo adịghị oke nhata na ịnya igwe 2-3 maịl n'otu ọkwa mbọ ahụ. Ịgba ọsọ bụ ọrụ mmetụta dị elu ma na-achọ ka ahụ dum na-agagharị.
Nke a bụ ụzọ atọ ị ga-esi jikọta ịgba ígwè na ịgba ọsọ n'ime atụmatụ ọzụzụ oge okpomọkụ: Zụọnụ ike na-agba ọsọ wee gbakee na igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ọsọ na-azụ ọzụzụ na mgbatị ahụ siri ike gụnyere ịgba ọsọ ogologo, ọrụ ọsọ ọsọ, ịgba ọsọ oge, na mgbatị elu ugwu, ị nwere ike ịkpa akwa mgbatị ịgba ígwè abụọ dị mfe kwa izu.
Ọ na-esiwanye ike karị - nkwonkwo gị na mọzụlụ gị ga-arụsi ọrụ ike karịa mgbe ị na-agba ọsọ. N'elu igwe kwụ otu ebe, sadulu na-akwado ibu ahụ gị ma igwe kwụ otu ebe gị na-enyere aka ịkwaga gị n'ihu. N'anya m, ọ dị m ka ịgba ọsọ otu awa na ọ dịkarịa ala awa abụọ n'ịnyịnya igwe.
Ịgba ígwè na-enyere aka ịgba ọsọ
Ajụjụ: Ịgba ígwè ọ na-enyere aka ịgba ọsọ
Ọ na-enyere aka ịgba ọsọ ịgba ọsọ ntachi obi
Azịza ngwa ngwa: Ịgba ígwè ọ na-enyere aka ịgba ọsọ Reddit
Ịgba ọsọ na-enyere gị aka ịgba ígwè
Azịza ọsọ ọsọ: Ịgba ígwè ọ na-enyere aka ịgba ntachi obi
Na-enyere aka ịgba ọsọ n'okporo ụzọ ịgba ígwè
Azịza ọsọ ọsọ: Ịgba ígwè ọ na-enyere aka n'ịgba ọsọ
Ịgba ọsọ ime ụlọ na-enyere aka na ịgba ọsọ
Ịgba ígwè nwere ike inyere gị aka ịgba ọsọ ọsọ
Ajụjụ: Ịgba ígwè ọ na-enyere gị aka ịgba ọsọ ka mma
Azịza ngwa ngwa: Ịgba ígwè ọ na-enyere gị aka ịgba ọsọ ọsọ